डिआइजी रञ्जन कोइराला रिहा भएपछि मुख खोले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले – Pahilo Page
डिआइजी रञ्जन कोइराला रिहा भएपछि मुख खोले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले
८ श्रावण २०७७, बिहीबार २१:३७ 985 पटक हेरिएको
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइराला रिहा भएपछि मुख खोल्नुभएको छ । उहाँले व्यंग्यात्मक शैलीमा सरकारप्रति नै औंला उठाउनु भएको छ ।
ट्वीट गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले पत्नीको हत्या गर्ने डिआइजी अदालतबाट सजाय कटौती गराएर विजयी राजनेता झैं हात हल्लाउँदै निस्किएको भन्दै व्यंग्य गर्नुभएको छ । उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘पत्नीको हत्या गर्ने डिआइजी अदालतबाट सजाय कटौती गराएर विजयी राजनेता झैं हात हल्लाउँदै निस्कन्छ ।’
डा. भट्टराईले जाँड खाएर गाडी चलाउँदा सडकपेटीमा मान्छे मार्ने धनाढ्यको छोरो अदालतबाट धरौटीमा रिहा हुन्छ भन्दै पूर्व आइजीपीविरुद्ध सरकारले मुद्दा नै दर्ता नगरेकोमा व्यंग्य गर्नुभएको छ । उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ, ‘सांसद अपहरण गर्ने पूर्व आइजीपीविरूद्ध सरकारले मुद्दै चलाउँदैन । यो असफल राज्यको लक्षण नभए के हो ?’